အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မကွေး) | TVET Myanmar
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မကွေး) ကို၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ မေလ၊(၅)ရက်နေ့တွင် စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
လူငယ်၊လူရွယ်များအတွက် အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်မှာပင် နည်းပညာဘာသာရပ်များ လေ့လာသင်ကြားခွင့်ရရှိစေရန်၊
တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် ဒေသလိုအပ်ချက်ဖြစ်သော နည်းပညာ နှင့်သက်မွေးပညာဆိုင်ရာကာလတိုသင်တန်းများ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးရန်
စဉ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောကာလ အမည်
၁ ၂၀၀၉-၂၀၁၅ ဦးထွန်းထွန်း
၂ ၂၀၁၅-၂၀၁၈ ဦးသက်နိုင်
၃ ၂၀၁၈-လက်ရှိအချိန်ထိ ဦးခင်မောင်ညွန့်
၂၀၁၀-၂၀၁၁ ပညာသင်နှစ်တွင် သင်တန်းအမျိုးအစားအလိုက်မွေးထုတ်ခဲ့သော
စဉ် သင်တန်းအမည် ​ကျောင်းသား/သူ
၁။ အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း(BT) ၅၇
၂။ ​မော်တော်ယာဉ်၊အင်ဂျင်ပြုပြင်မှုနည်းပညာသင်တန်း(AMT) ၃၀
၃။ စက်ပစ္စည်းခုတ်စားထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသင်တန်း(MT) ၂၅
၄။ အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း(EcT) ၂၅
၅။ လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း(ET) ၂၅
၆။ အဆောက်အဦဆိုင်ရာနည်းပညာသင်တန်း(BST) ၁၈
2011 -2012 ပညာသင်နှစ်တွင် သင်တန်းအမျိုးအစားအလိုက် မွေးထုတ်ခဲ့သော ကျောင်းသား/သူ ဦးရေ
စဉ် သင်တန်းအမျိုးအမည် ကျောင်းသား/သူ
၁။ အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း(BT) ၂၄
၂။ မော်တော်ယာဉ်အင်ဂျင်ပြုပြင်မှုနည်းပညာသင်တန်း(AMT) ၁၅
၃။ စက်ပစ္စည်းခုတ်စားထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသင်တန်း(MT) ၅
၄။ အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း(EcT) ၅
၅။ လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း(ET) ၆
၆။ အဆောက်အဦဆိုင်ရာနည်းပညာသင်တန်း(BST) ၇
2012 -2013 ပညာသင်နှစ်တွင် သင်တန်းအမျိုးအစားအလိုက် မွေးထုတ်ခဲ့သော ကျောင်းသား/သူ ဦးရေ
၁။ အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း(BT) ၂၅
၂။ မော်တော်ယာဉ်အင်ဂျင်ပြုပြင်မှုနည်းပညာသင်တန်း(AMT) ၁၀
၃။ စက်ပစ္စည်းခုတ်စားထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသင်တန်း(MT) ၄
၅။ လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း(ET) ၈
၆။ အဆောက်အဦဆိုင်ရာနည်းပညာသင်တန်း(BST) ၄
2013-2014 ပညာသင်နှစ်တွင် သင်တန်းအမျိုးအစားအလိုက် မွေးထုတ်ခဲ့သော ကျောင်းသား/သူ ဦးရေ
၁။ အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း(BT) ၂၂
၂။ မော်တော်ယာဉ်အင်ဂျင်ပြုပြင်မှုနည်းပညာသင်တန်း(AMT) ၁၄
၃။ အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း(EcT) ၁၄
2014 -2015 ပညာသင်နှစ်တွင် သင်တန်းအမျိုးအစားအလိုက် မွေးထုတ်ခဲ့သော ကျောင်းသား/သူ ဦးရေ
၁။ အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း(BT) ၂၁
၂။ မော်တော်ယာဉ်အင်ဂျင်ပြုပြင်မှုနည်းပညာသင်တန်း(AMT) ၁၁
၃။ အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း(EcT) ၅
၄။ လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း(ET) ၇
၅။ သုတနည်းပညာသင်တန်း(IT) ၁၁
2015-2016 ပညာသင်နှစ်တွင် သင်တန်းအမျိုးအစားအလိုက်မွေးထုတ်ခဲ့သောကျောင်းသား/သူ ဦးရေ
၁။ အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း(BT) ၁၄
၂။ မော်တော်ယာဉ်အင်ဂျင်ပြုပြင်မှုနည်းပညာသင်တန်း(AMT) ၁၂
၃။ စက်ပစ္စည်းခုတ်စားထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသင်တန်း(MT) ၁
၄။ အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း(EcT) ၁၁
၆။ သုတနည်းပညာသင်တန်း(IT) ၆
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ်တွင် သင်တန်းအမျိုးအစားအလိုက်မွေးထုတ်ခဲ့သောကျောင်းသား/သူဦးရေ
စဉ် သင်တန်းအမည် ​ကျောင်းသား/သူဦးရေ
၁။ အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း(BT) ၅၃
၂။ ​မော်တော်ယာဉ်၊အင်ဂျင်ပြုပြင်မှုနည်းပညာသင်တန်း(AMT) ၃၅
၃။ စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသင်တန်း(MT) ၁၄
၄။ အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း(EcT) ၁၈
၅။ လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း(ET) ၂၂
၆။ သုတနည်းပညာသင်တန်း(IT) ၄
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်တွင် သင်တန်းအမျိုးအစားအလိုက်မွေးထုတ်ခဲ့သောကျောင်းသား/သူဦးရေ
၂။ ​မော်တော်ယာဉ်၊အင်ဂျင်ပြုပြင်မှုနည်းပညာသင်တန်း(AMT) ၁၉
၃။ စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသင်တန်း(MT) ၁၆
၄။ အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း(EcT) ၈
၆။ သုတနည်းပညာသင်တန်း(IT) ၁၅
2015-2016 ခုနှစ်တွင် အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မကွေး)မှ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးသော Polytechnic ကာလတိုသင်တန်းများ
စဉ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သောသင်တန်းများ သင်တန်းအမှတ်စဉ် သင်တန်းကာလ မွေးထုတ်ခဲ့ ပြီးသော သင်တန်းသား အရေအတွက်
၁။ အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၁ (၂၇.၆.၂၀၁၅ မှ ၂၄.၈.၂၀၁၅ထိ)၂လ ၁၀
၂။ လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာများပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း ၁ (၂၂.၈.၂၀၁၅ မှ ၂.၉. ၂၀၁၅ ထိ) ၁လ ၈
၃။ အခြေခံဒီဇယ်နှင့်ဓါတ်ဆီအင်ဂျင် ပြုပြင်ခြင်းသင်တန်း ၁ (၂၆.၉.၂၀၁၅ မှ ၈.၁၀.၂၀၁၅ထိ)၂ပတ် ၂၂
၄။ အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၂ (၃.၁၂.၂၀၁၅ မှ ၂၅.၁.၂၀၁၆ ထိ)၂လ ၁၃
၅။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း ၁ (၅.၁၂.၂၀၁၅ မှ ၃၁.၁.၂၀၁၆ ထိ)၂လ ၁၀
၆။ အခြေခံမြေတိုင်းတာခြင်းသင်တန်း ၁ (၇.၁၂.၂၀၁၅ မှ ၄.၁၂. ၂၀၁၅ထိ)၂ပတ် ၁၄
၇။ အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း ၃ (၁၇.၁၀.၂၀၁၆ မှ ၃၀. ၁၁.၂၀၁၆ထိ)၁လခွဲ ၉
၈။ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသင်တန်း ၂ (၂၂.၁၀.၂၀၁၆ မှ ၂၂.၁၁.၂၀၁၆ထိ)၁လ ၆
၉။ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်း သင်တန်း ၁ (၂၄.၁၀.၂၀၁၆ မှ ၂၃.၁၁.၂၀၁၆ထိ)၁လ ၁၁
၁၀။ အခြေခံဂဟေဆက်နည်းသင်တန်း ၁ (၂၂.၁၀.၂၀၁၆ မှ ၂၂.၁၁.၂၀၁၆ထိ)၁လ ၁၅
၂၀၁၆-၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မကွေး)မှ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးသောPolytechnic ကာလတိုသင်တန်းများ
စဉ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော သင်တန်းများ သင်တန်းအမှတ်စဉ် သင်တန်းကာလ ​မွေးထုတ်ခဲ့ပြီးသော
(Helvetas၏ထောက်ပံ့မှု) အပတ်စဉ်(၁) (၈.၇.၂၀၁၇ မှ ၉.၉.၂၀၁၇ ထိ) ၁၂
၂ အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း အပတ်စဉ်(၄) (၁.၈.၂၀၁၇ မှ ၁.၉.၂၀၁၇ ထိ) ၁၆
၃ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း အပတ်စဉ်(၂) (၁.၈.၂၀၁၇ မှ ၁.၉.၂၀၁၇ ထိ) ၁၀
၄ ဂဟေဆက်သင်တန်း အပတ်စဉ်(၂) (၁.၈.၂၀၁၇ မှ ၁.၉.၂၀၁၇ ထိ) ၉
၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မကွေး)မှ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးသောPolytechnic ကာလတိုသင်တန်းများ
(Helvetas၏ထောက်ပံ့မှု) အပတ်စဉ်(၂) (၁၀.၁၀.၂၀၁၇ မှ
၁၀.၁.၂၀၁၈ ထိ) ၁၉
(Helvetas၏ထောက်ပံ့မှု) အပတ်စဉ်(၃) (၁၅.၁၂.၂၀၁၇ မှ
၁၅.၃.၂၀၁၈ ထိ) ၁၅
(Helvetas၏ထောက်ပံ့မှု) အပတ်စဉ်(၄) (၅.၃.၂၀၁၈ မှ
၅.၆.၂၀၁၈ ထိ) ၅
၄ အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း အပတ်စဉ်(၅) (၁၉.၁၂.၂၀၁၇ မှ
၂၃.၁.၂၀၁၈ ထိ) ၁၄
၅ အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း အပတ်စဉ်(၆) (၁၃.၈.၂၀၁၈ မှ
၁၃.၉.၂၀၁၈ ထိ) ၁၀
၆ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း အပတ်စဉ်(၃) (၁၅.၁၂.၂၀၁၇ မှ
၃၁.၁.၂၀၁၈ ထိ) ၁၉
၇ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း အပတ်စဉ်(၄) (၁၃.၈.၂၀၁၈ မှ
၁၃.၉.၂၀၁၈ ထိ) ၁၉
၈ ဂဟေဆက်သင်တန်း အပတ်စဉ်(၃) (၁၅.၁၂.၂၀၁၇ မှ
၃၁.၁.၂၀၁၈ ထိ) ၁၆
၉ ဂဟေဆက်သင်တန်း အပတ်စဉ်(၄) (၁၃.၈.၂၀၁၈ မှ
၁၃.၉.၂၀၁၈ ထိ) ၁၂
၁၀ English Speaking သင်တန်း အပတ်စဉ်(၁) (၁၆.၁၂.၂၀၁၇ မှ
၁၄.၁.၂၀၁၈ ထိ) ၅
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မကွေး)သည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးမြို့၊ ကံပြား ကျေးရွာအနီးတွင် နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မကွေး)နှင့် ကျောင်းဝန်းတစ်ခုတည်းတွင်တည်ရှိပါသည်။ ကံပြားအခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၏မြောက်ဘက်ကပ်လှျက်တွင်တည်ရှိပါသည်။မကွေးမြို့မှ (၇)မိုင်ကွာဝေးပြီး ရန်ကုန် - ပြည် - မန္တလေးကားလမ်းဘေး မှ(၄)ဖာလုံ အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ အကျယ်အဝန်းအားဖြင့်(၇.၉၈)ဧကခန့် ကျယ်ဝန်းပါသည်။
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(မကွေး)သည် အောက်ပါအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
ကျောင်းမှ ကျောင်းစည်းကမ်းလိုက်နာပြီး ​ကျောင်းတက်မှန်သော ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများ အားလစဉ် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ၃၀၀၀၀ ကျပ်ထောက်ပံ့ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
နည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(GTHS)စာမေးပွဲအား ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ပါက အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(GTI) သို့ ဆက်လက်တက်ရောက်ခွင့် ရမည်ဖြစ်ပြီး သာမန်အောင်မြင်သူများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိေအာင် လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းချိတ်ဆက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
စဉ် သင်တန်း ကျား မ စုစုပေါင်း
၁ ပထမနှစ် အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း ၂၂ ၁၀ ၃၂
၂ ဒုတိယနှစ် အဆောက်အဦနည်းပညာသင်တန်း ၁၉ ၉ ၂၈
၃ ပထမနှစ် သုတနည်းပညာသင်တန်း ၁၇ ၁ ၁၈
၄ ဒုတိယနှစ် သုတနည်းပညာသင်တန်း ၈ ၆ ၁၄
၅ ပထမနှစ်မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း ၂၇ - ၂၇
၆ ဒုတိယနှစ်မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း ၂၁ - ၂၁
၇ ပထမနှစ် အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း ၁၉ ၃ ၂၂
၈ ဒုတိယနှစ် အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာသင်တန်း ၁၀ ၁၀ ၂၀
၉ ပထမနှစ် လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း ၂၂ ၅ ၂၇
၁၀ ဒုတိယနှစ် လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း ၁၅ ၄ ၁၉
၁၁ ပထမနှစ်စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသင်တန်း ၂၁ - ၂၁
၁၂ ဒုတိယနှစ်စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာ သင်တန်း ၁၉ - ၁၉
စုစုပေါင်း ၂၂၀ ၄၈ ၂၆၈
စဉ် ဌာန ဆရာ/မ မှတ်ချက်
၁ မြန်မာစာ ၂ နေ့စား(၂)ဦး
၂ အင်္ဂလိပ်စာ ၄
၃ သင်္ချာ ၃
၄ ရူပဗေဒ ၄
၅ ဓါတုဗေဒ ၂
၆ အဆောက်အဦနည်းပညာဌာန ၇
၇ မော်တော်ယာဉ်၊အင်ဂျင်ပြုပြင်မှုနည်းပညာဌာန ၆
၈ အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာဌာန ၆
၉ လျှပ်စစ်နည်းပညာဌာန ၇
၁၀ သုတနည်းပညာဌာန ၇
နိုင်ငံတကာမှကမ်းလှမ်းလာသော ပညာေတာ်သင်ဆု(Scholarship) များကိုလည်း အခါအခွင့်သင့်လှျင် သင့်သလို လျှေက်ထားနိုင်ပါသည်။